Fanamafisana ny fikarohana eo an-toerana vs nasionaly vs International Search
Asabotsy, Septambra 24, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia mihemotra rehefa miresaka fanatsarana ny fikarohana ao an-toerana. Satria fantatra ho orinasa nasionaly na iraisam-pirenena izy ireo dia mino izy ireo fa hanimba ny orinasany ny fanatsarana ny fikarohana eo an-toerana fa tsy fanampiana. Tsy izany mihitsy. Raha ny marina, ny asantsika dia niteraka valiny hafa. Ny fandresena ny valin'ny karoka eo an-toerana dia afaka manatsara ny fahafahanao mahazo laharam-pirenena na iraisam-pirenena.
DK New Media miasa miaraka amin'ny mpanjifa iraisam-pirenena. Manana mpanjifa izahay any Nouvelle Zélande, UK ary Frantsa. Na izany aza, manana mpanjifa marobe ihany koa izahay eto Indianapolis. Manana tambajotra sakaiza be koa izahay eto Indianapolis. Ny valiny dia misy foana ny resadresaka an-tserasera momba ny zavatra tadiavintsika - noho izany dia mahazo fiheverana be dia be sy fahefana lehibe amin'ny motera fikarohana amin'ny teny eo an-toerana izahay.
Tsy vitan'ny hoe manatsara ny teny toa antsika izahay Indianapolis, manohana ny hetsika isam-paritra izahay, manana ny adiresinay eo amin'ny bokin'ny pejy tsirairay izahay, ary manana mombamomba ny orinasa matanjaka ao amin'ny Google… mifantoka amin'ny toerana misy anay avokoa ny toerana rehetra. Tsy nanakana anay tsy hibahan-toerana amin'ny valim-pikarohana nasionaly sy iraisam-pirenena izany!
Ny zava-misy dia ny fandresena ny fikarohana teo an-toerana dia nanangana ny fahefan'ny faritra misy anay ary nahatonga anay nitombo tamin'ny teny fikarohana tsy jeografika. Efa eo an-dàlana handresy valim-pikarohana am-polony maro izahay momba ny fifaninanana mifandraika amin'ny SEO, mifandraika amin'ny fiaraha-monina ary mifandraika amin'ny maso ivoho… Tsy naninona anay na dia kely aza ny fanatsarana teo an-toerana.
Raha tokony tsy hiraharaha ny fikarohana eo an-toerana aho dia te hanafika Bebe kokoa faritra jeografika - toa an'i Chicago, Louisville, Columbus, Cleveland ary Detroit! Raha mandray mpiasa lavitra isika, dia hiasa mafy handresy ny biraony amin'ny fikarohana jeografika eo an-toerana. Ho an'ireo mpanjifanay izay manana biraom-paritra dia niara-niasa tamin'izy ireo izahay mba hametraka subpages sy subdomain izay kendrena isaky ny faritra jeografika. Raha manana fanatrehan'ny faritra tsara izy ireo, dia hanampy ny laharan'ny toerana misy azy ireo izany.
Ary raha mijoro eo an-toerana izy ireo… dia efa akaiky ny teny malalaka kokoa hisarihana orinasa nasionaly na iraisam-pirenena!
Lesona 7 nianarana tamin'ny fampiroboroboana ny asa soratanao
Sep 28, 2011 amin'ny 9: 38 AM
Ny fanatsarana ny fikarohana eo an-toerana dia tsy midika velively fa tsy ho afaka hifaninana amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena ianao. Mahagaga tokoa ny isan'ny orinasa tsy sahy mameno ny mombamomba azy eo an-toerana, mieritreritra fa midika izany fa ho voromailala izy ireo. Azo atao, ary ampirisihina, hanatsara ny pejy sasany ho an'ny karoka eo an-toerana sy any amin'ny firenena mba hisarihana ny mpijery.